Nhau - Shanu diki shanduko yekusimudzira kugona kwemiti
Shanduko shanu diki kusimudzira kushanda kwemiti
Simba remagetsi kumhanyisa mota yemagetsi pamusoro pemakore gumi ingangoita zvakapetwa makumi matatu mutengo wekutanga wekutenga. Nesimba rekushandisa zvine chekuita nehukuru hwakawanda hwehupenyu hwese, Marek Lukaszczyk wemota uye dhiraivha dhizaini, WEG, inotsanangura nzira shanu dzekuvandudza magetsi simba. Nekutenda, shanduko mumuti haifanire kunge iri hombe kuti ikohwe kuchengetedza. Zvizhinji zvekuchinja uku zvinoshanda pamwe neyako tsoka yekutsika nemidziyo.
Mazhinji magetsi emagetsi ari kushandiswa angave akaderera mashandiro kana asina kunyatsoenzana saizi yekushandisa. Nyaya mbiri idzi dzinoguma nemamota kushanda nesimba kupfuura zvavanoda, vachishandisa simba rakawanda mukuita. Saizvozvo, mota dzekare dzinogona kunge dzakadzoserwa kashoma panguva yekugadzirisa, zvichideredza kushanda kwayo.
Muchokwadi, inofungidzirwa kuti mota inorasikirwa imwe kusvika maviri muzana kunyatsoita nguva dzese painodzokedzwazve. Nekuti simba rekushandisa rinoita zvikamu makumi mapfumbamwe neshanu kubva muzana zvehupenyu hwese kutenderera kwemotokari, kubhadhara mari yekuwedzera yemotokari kunoguma nekudzoka pakudyara pamusoro pehupenyu hwayo.
Asi kana mota iri kushanda, uye yanga ichishanda kwemakumi emakore, zvakakosha here kunetseka kwekuisimudzira? Nemutengesi wemotokari chaiye, maitiro ekuvandudza haana kukanganisa. Iyo pre-yakatsanangurwa chirongwa inovimbisa iyo mota kuchinjisa inoitwa nekukurumidza uye ine mashoma mashoma yekuzorora. Kusarudza maindasitiri akaenzana tsoka anobatsira kudzikamisa maitiro aya, segadziriro yefekitori isingazodi kuchinjwa.
Zviripachena, kana iwe uine mazana emamota mune yako nzvimbo, hazvigoneke kuzvitsiva kamwechete. Tarisa mota dzakaiswa kumashure kuti dzitange kugadzirisa uye kuronga chirongwa chekutsiva kweanopfuura makore maviri kusvika matatu kudzivirira nguva yekudonha.
Mota yekuita maseru
Kuchengeta mota dzinomhanya zvakakwana, mamaneja emiti anogona kuisa masetrofit sensors. Iine metric yakakosha senge vibration uye tembiricha inotariswa mune chaiyo-nguva, yakavakirwa mune yekufungidzira yekugadzirisa analytics inozoona ramangwana matambudziko pamberi pekukundikana. Iine sensor-based application mota dhata inotorwa uye inotumirwa kune smartphone kana piritsi. Kupfuura muBrazil, imwe fekitori yekugadzira yakashandisa tekinoroji iyi pamamota anotyaira mana akafanana mhepo inodzoreredza michina. Kana timu yekuchengetedza payakagashira yambiro yekuti imwe yaive nematanho epamusoro ekudedera kupfuura chikamu chinogamuchirwa, kusvinura kwavo kwakakwidziridzwa kwakavagonesa kugadzirisa dambudziko iri.
Pasina iyi nzwisiso, kudzima kusingatarisirwe kwefekitori kwaigona kuve kwakamuka. Asi iripi simba rekuchengetedza mune zvataurwa pamusoro apa? Kutanga, kuwedzera kudengenyeka kunowedzera kushandiswa kwesimba. Makumbo akasimba akasunganidzwa pamota uye kuomarara kwakanaka kwemuchina kwakakosha kuti uve nechokwadi chekuzununguka zvishoma. Nekugadzirisa iyo isiri-yakakwana kuita nekukurumidza, iri simba rakapambadzwa rakachengetwa padiki.
Kechipiri, nekudzivirira iyo yakazara fekitori yakavharwa, masimba epamusoro anodikanwa kutangazve michina yese aisada.
Isa zvinyoro nyoro
Kune michina uye mota dzisingamhanye dzichiramba, mamaneja emiti anofanirwa kuisa anotangisa anotapira. Izvi zvishandiso zvinoderedza kwenguva pfupi mutoro uye torque muchitima chemagetsi uye nemagetsi magetsi emagetsi panguva yekutanga-kumusoro.
Funga izvi sekuve parobhoti tsvuku yerobhoti. Ipo iwe uchikwanisa kurova tsoka yako pasi pane peturu peya kana mwenje washanduka girini, iwe unoziva iyi isiri nzira uye inogadzirisa nzira yekutyaira - pamwe ine ngozi.
Saizvozvowo, pamidziyo yemuchina, kutanga kunonoka kunoshandisa simba shoma uye kunoguma nekunetsekana zvishoma pane mota nemubato. Pamusoro pehupenyu hwemotokari, inotapira inotanga inopa mari yekuchengetedza inoitiswa pakuderedza simba remagetsi. Vamwe vatambi vakapfava vakavakawo otomatiki simba rekugadzirisa. Yakanakira compressor kunyorera, iyo nyoro yekutanga inotonga zvinodiwa mutoro uye inogadzirisa zvinoenderana kuti ishandise simba kushoma.
Shandisa shanduko yekumhanyisa drive (VSD)
Dzimwe nguva dzinonzi seyakajairwa frequency frequency drive (VFD) kana inverter drive, VSDs chinomhanyisa kumhanya kwemagetsi mota, zvichibva nezvinodiwa pakushanda. Pasina kudzora uku, iyo sisitimu inongobhuna kana panodiwa simba shoma, kudzinga simba rakapambadzwa sekupisa. Mune fan fan semuenzaniso, VSDs dzinodzora kufefetera kwemhepo zvinoenderana nezvinodiwa, pane kungo cheka kufema kwemweya uchisara pakukwirira kwakawanda.
Sanganisa VSD ine super-premium inoshanda mota uye iyo yakaderedzwa simba remitengo inozozvitaurira yega. Mukutonhodza shongwe kunyorera semuenzaniso, kushandisa W22 IE4 super premium mota ine CFW701 HVAC VSDyakakura zvakaenzana, inopa kudzikisira simba remagetsi anosvika ku80% uye avhareji kuchengetedza mvura kwe22%.
Nepo mutemo wazvino uchitaura kuti IE2 mota dzinofanirwa kushandiswa neVSD, izvi zvave zvakaoma kumanikidza mhiri kwemaindasitiri. Izvi zvinotsanangura kuti nei mirau iri kuva yakaoma. Kubva munaChikunguru 1, 2021, matatu phase motors anofanirwa kusangana nemitezo yeEE3, zvisinei nechero ipi yeVSD inowedzerwa.
Shanduko dze2021 dziri kubatawo maDSD kumazinga epamusoro, ichipa iri chigadzirwa chigadzirwa IE ratings zvakare. Ivo vachatarisirwa kusangana neIE2 chiyero, kunyangwe IE2 dhiraivha isingamiriri kuenzana kushanda kweiyo IE2 mota - aya akapatsanurwa masystem masisitimu.
Shandisa zvizere maVDS
Kuisa VSD ndechimwe chinhu, kuishandisa kuzere kugona kwayo chimwewo chinhu. Mazhinji maVDS akazara nezvinhu zvinobatsira izvo mamaneja ekudyara asingazive kuti aripo. Pombi kunyorera muenzaniso wakanaka. Kubata kwemvura kunogona kunge kuchinetsa, pakati pekuvuza uye kwakadzika kwemvura, pane zvakawanda zvinogona kukanganisika. Yakavakirwa-mukutonga inogonesa mashandisiro ekushandisa emota zvichienderana nezvinodiwa zvekugadzira uye kuwanikwa kwemvura.
Otomatiki kutyorwa kwepombi kuona muVSD kunogona kuona nzvimbo dzinodonha mvura uye kugadzirisa mota mashandiro zvinoenderana. Pamusoro pezvo, pombi yakaoma yekutsvaga inoreva kana mvura ikapera, mota inozoregedzwa uye yambiro yepombi yakaomeswa. Muzviitiko zvese izvi, mota inoderedza mashandisirwo ayo kana simba shoma richidikanwa kubata zviwanikwa zviripo.
Kana ukashandisa akawanda mota mune yekushandisa pombi, jockey pombi yekudzora inogona zvakare kugadzirisa mashandisiro emhando dzakasiyana mota. Zvinogona kunge kudiwa kunongoda mota diki kuti ishandiswe, kana mubatanidzwa wediki uye hombe mota. Pump Genius inopa yakawedzera kuchinjika yekushandisa iyo yakaenzana saizi mota kune yakapihwa kuyerera chiyero.
MaVSD anokwanisa kutoita otomatiki kuchenesa kwemotokari impeller, kuona kudzikisira kunoitwa mushe. Izvi zvinoita kuti mota irambe yakanakisa mamiriro ayo ane mhedzisiro pane kushanda nesimba.
Kana iwe usiri kufara kubhadhara makumi matatu nguva iyo mota mota mumagetsi emagetsi pamusoro pegumi, inguva yekuita imwe yeshanduko idzi. Izvo hazvizoitika nehusiku, asi chirongwa chakarongeka chinotarisana nemarwadzo ako asinganyatso kuguma chinogonesa mukubatsira kwesimba rekuita.